July 2020 - MM Daily Life
ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါးမှာကပ်ပြီး အိပ်ပေးလိုက်ရင် ဒီလိုအံ့မခန်းတွေ ဖြစ်လာမယ်
July 31, 2020 by MM Daily Life
ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါးမှာကပ်ပြီး အိပ်ပေးလိုက်ရင် ဒီလိုအံ့မခန်းတွေ ဖြစ်လာမယ် ခြေဖဝါးမှာ ကြက်သွန်နီကိုကပ်ပြီး အိပ်ပေးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်တာ သင်သိပါသလား …? ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ တိုင်းရင်းဆေးပညာတွေထဲမှာ အရမ်းကို ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်လမ်းလေးဟာ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ကျန်းမာသွားစေနိုင်ပါတယ် …။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ကြက်သွန်နီကို လှီးပြီးခြေဖဝါးမှာ ကပ်ပြီး အိပ်ပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးတယ်” ကြက်သွန်နီဟာ သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးမှာကပ်အိပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဆေးတစ်ခုခုကို မှီဝဲနေရသူဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီ့ဆေးတွေကို ပိုပြီး အစွမ်းထက်စေလို၊ သက်ရောက်မှုလည်း မြန်ဆန်စေပါတယ် …။ (၂) အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖြေပေးတယ်” … Read more
တစ်ချိန်က ကိုယ့်ကိုယ် လက်လွှတ်ထားရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်တဲ့ အချက်များ
တစ်ချိန်က ကိုယ့်ကိုယ် လက်လွှတ်ထားရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်တဲ့ အချက်များ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ လက်တွဲခဲ့ တွဲခဲ့၊ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ စေတနာထား ဆက်ဆံခဲ့ ဆက်ဆံခဲ့၊ ကိုယ်ဘယ်လောက် အနစ်နာခံခဲ့ ပါစေ … ။ ကိုယ့်လက်ကို လွှတ်ချပစ်ခဲ့ သူတွေဆိုိတာ ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ ရှိတတ်စမြဲပါ။ ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ် လက်လွှတ်ထားရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိကိုရှိလို့နေပါတယ်နော်။ (1) ကိုယ့်ကိုယ် ပိုတော်စေခဲ့လို့ အတိုက်အခိုက်တွေ၊ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရတဲ့ သူတွေဆိုတာ ပိုတိုးတက်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံလား။ အလုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အချစ်ရေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကတော့ ယုံကြည်အားကိုးပြီး လက်တွဲခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ် အသုံးမကျသူ တစ်ယောက်လို သတ်မှတ်ပြီး လက်တွဲဖြုတ်ခံရတာမျိုးပေါ့။ ဒီလို … Read more
ခန္ဓာကိုယ် မဝလည်း ဗိုက်နားမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုး အဆီပိုများ ဘယ်လို ချမလဲ ?
ခန္ဓာကိုယ် မဝလည်း ဗိုက်နားမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုး အဆီပိုများ ဘယ်လို ချမလဲ ? ၁။ ခါးပတ်ပတ်လည်မှ အဆီပိုများ ခါးပတ်ပတ်လည်မှာ အလှပျက်စွာ ရှိနေတတ်တဲ့ အဆီအဖုအထစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားရသည့်အ ကြောင်းရင်းတွေ က တော့ အထိုင်များခြင်း၊ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်ခြင်း၊ အချိုစားလွန်းခြင်းနဲ့ ကစီဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ပိုမိုစားသုံးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါ တယ်။ ခါးပတ်ပတ်လည်က အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှားချင်ရင်တော့.. ( ၁ ) အယ်ကိုဟောလ်ပါဝင်တဲ့ ဝိုင်၊ အရက်၊ ဘီယာ တွေကို လျှော့သောက်ပါ။ ( ၂ ) အဆီနည်းပြီး အာဟာရဓာတ်ဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အသီးအနှံတွေကို စားသောက်ပါ။ ( ၃ ) ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များများ အချိန်တစ်ခုပေးပြီး … Read more
ဆံပင်အရှည်နှေး လို့စိတ်ညစ်နေသူတွေ အတွက် တစ်လ အတွင်း သိသိသာသာ ဆံပင်ရှည်လာအောင်
ဆံပင်အရှည်နှေး လို့စိတ်ညစ်နေသူတွေ အတွက် တစ်လ အတွင်း သိသိသာသာ ဆံပင်ရှည်လာအောင် ဆံပင်အရှည်နှေး လို့စိတ်ညစ်နေသူတွေ အတွက် တစ်လ အတွင်း သိသိသာသာ ဆံပင်ရှည်လာအောင် ဆံပင်က ဒုတိယ မျက်နှာ ဆိုတာ လူတိုင်း သိပြီး သားဖြစ် မှာပါ။ ဆံပင်ပုံစံက ကိုယ်နဲ့ မလိုက်ရင် လုံးဝမလှတာလည်း အားလုံးအသိ ပါပဲ။ ဆံပင် အရှည်ထား ချင်ပေ မယ့် စိတ်မ ရှည်တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ တစ်လ အတွင်း ဆံပင်ရှည် လွယ်ပြီးတောက်ပြောင်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ (၁) မကြာခဏအဖျား တိပေးပါ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကို မကြာခဏ တိပေးတာ က ဆံပင်ရဲ့မကျန်းမာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ကိုဖယ်ထုတ် လိုက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် … Read more
အိမ်တွင်းမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာ (၆) မျိုး
အိမ်တွင်းမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာ (၆) မျိုး သင့်အိမ်မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်လား။ ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေလား။ အိမ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်တွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရလား “ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့၊ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့” ဆိုသလို ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် အကျုံးဝင်နေသေးတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မေ့ပစ်လို့တော့ မရပါဘူး။ အခုပြောပြမှာကတော့ အိမ်ထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကြောင့်ချည်းပဲ ကံဆိုးနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီအရာတွေကြောင့် ပိုကံဆိုးသွားနိုင်တယ်၊ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိတ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ သတိဟူသည် လိုသည်မရှိဘူး မဟုတ်လား။ သင်ကံဆိုးနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒီအရာတွေကို အိမ်ထဲမှာ၊ အခန်းထဲမှာ ထားမိလားဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ (၁) … Read more
သင့်ကိုတစ်ခြားသူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုတုံ့ပြန်ပါ…
သင့်ကိုတစ်ခြားသူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုတုံ့ပြန်ပါ… လူတိုင်းက မတူညီကြပါဘူး။ ဒါကို သူကတော့ ဘယ်လို တော်တာ နင်ကတော့… ဆိုပြီး နှိုင်းယှဉ်တာတွေ၊ တစ်ခြားသူတွေက နင့်အရွယ်မှာ ဘာဖြစ်နေပြီလေ စတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို လူတိုင်း ကြားဖူး ကြမှာပါ။ ကိုယ့်ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာကို ကြိုက်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောဆိုမှုတွေကတော့ ရှိနေဆဲပါပဲ။ ဒီလို ပြောဆိုမှုတွေ ခံလိုက်ရတဲ့အချိန် သင့်ဘက်က အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေက အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါနော် …။ (၁) သင်က တစ်ခြားသူ မဟုတ်ကြောင်း ပြောပါ” သင့်ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးက မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သင်မဟုတ်တဲ့သူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြစ်တင်မှုတွေ အားမလို အားမရ … Read more
ယနေ့မနက်ခင်း ကျုံးဘေးတွင် အမှိုက်ထုပ်ဟူ၍ ကောက်ယူ လိုက်သောအခါ..
ယနေ့မနက်ခင်း ကျုံးဘေးတွင် အမှိုက်ထုပ်ဟူ၍ ကောက်ယူ လိုက်သောအခါ.. မန္တလေးများ ပိုက်ဆံပေါချက်၊ ၉ သိန်းကျော်ကျော်ကို ကျုံးဘေးလွန့်ပစ်သွားတယ် …။ မန္တလေးများ ပိုက်ဆံပေါချက် ၉ သိန်းကျော်ကျော်ကို ကျုံးဘေး လွှင့်ပစ်သွားတယ် …။ ကျုံးဘေး မနက်တိုင်းပြေး အမှိုက်များ တွေ့လျှင် ကောက်၍ ပုံထဲသို့ နိုင်ငံကြီးသား ပီသနေသည်မှာ မကြာသေး …၊ သိုသော် ယနေ့မနက် ခင်းတွင် အမှိုက်ဟူ၍ ကောက်လိုက်ရာ ငွေထုတ်ဖြစ်နေပါသောကြောင့် ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည် ပေးအပ်သွားပါ့မယ် …။ မှတ်ပုံတင် နှင့် အရောင်အဝယ်ဗောက်ချာ ပါပါသည် …။ ငွေ နှင့် ဗောက်ချာစာရင်းမှာ ကိုက်ပါသည်။ အခက်အခဲဖြစ်၍ ရောင်းခဲ့သည်ဖြစ်မည် …။ ပိုင်ရှင်အမှန် ဆိုလျှင်ဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျာ …။ ပိုင်ရှင်၏ ဂုဏ်သ်က္ခာအလေးထားသောကြောင့် … Read more
အိပ်ရေးမ၀ ၊ အိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်သူများအတွက်…
အိပ်ရေးမ၀ ၊ အိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်သူများအတွက်… “ညအိပ်မပျော်လျှင် အိမ်တွင်း သမားတော်ကုထုံး” ၁. ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ။အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်းပြီး အားရှိစေပါတယ် …..။ ၂. နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန် စေပါတယ် …။ ၃. ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက်၃တက်ထားအိပ်ပါ ။ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ် …။ ၄. ကြက်သွန်နီထက်ခြက်ခွဲပြီး ညအိပ်ခါနီး ခြေဖဝါး အလည်တည့်တည့်ကပ်အိပ်ပါ ။တစ်ကိုယ်လုံးမှ အဆိပ်အတောက် များကို စုပ်ယူပါလိမ့်မယ် …။ အအေးမိ နှာစေးသူ ကလေး လူကြီးမရွေး လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါမယ် …..။ ဦးမြကြိုင်(ကိုယ်တိုင်စမ်သပ်ပြီးမှ မျှဝေသည်) ရုတ်တရက် အား အင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူးဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလို ဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံးကြည့်ပါနော် …။ … Read more
ဘာကိုအရင်မြင်သလဲ?(သင်ပထမဆုံးမြင်တဲ့ အရာက သင့်အကြောင်းပြောပြလိမ့်မယ်)
ဘာကိုအရင်မြင်သလဲ?(သင်ပထမဆုံးမြင်တဲ့ အရာက သင့်အကြောင်းပြောပြလိမ့်မယ်) မိမိကိုယ်ကို မသိခြင်းက သင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ သူများအကြောင်းတွေကို စပ်စုနေတာထက် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပြန်ပြီး လေ့လာသင့်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အတွင်းထဲမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် မသိဘဲ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ပင်ကို စရိုက်လေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ် …။ ဒီနေ့ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် လူတွေအကြောင်း အနည်းငယ် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အချက်အားလုံးက မှန်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အားလုံးကို ခြုံပြီး သုံးသပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် …။ သင် ဘာကိုအရင်ဆုံးမြင်သလဲ? သော့ပေါက် – သင်ဟာ သင်မသိသေးတဲ့ အရာတွေအကြောင်း သင်ယူရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ comfort zone ထဲမှာလည်းနေချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားနေပါလိမ့်မယ်။ သူနဲ့ စကားသွားပြောလိုက်ပါ …။ ငိုနေတဲ့ပုံ … Read more
သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့ မနက်မှာ ထုတ်ပြန်မည့် ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ကျောင်းတွေမှာ လုံးဝမကပ်ပါ
သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့ မနက်မှာ ထုတ်ပြန်မည့် ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ကျောင်းတွေမှာ လုံးဝမကပ်ပါ သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့မနက်(၀၀: ၃၀)နာရီခွဲမှာ ထုတ်ပြန်မည့် ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ကျောင်းတွေ မှာ လုံးဝ မကပ်ပါ။ အောင်စာရင်း ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရပါမယ် …။ (၁၀) တန်းအောင်စာရင်းကို ကျောင်းတွေမှာ လုံးဝ မကပ်ပါဘူး၊ လိုင်း‌ပေါ် ကနေ ကြည့်ရပါမယ် ၊ အောင်စာရင်း ကြည့်ချင် ရင် ဒီနေရာမှာ ကြည့်ပေးပါ (www.myanmarexam.org) (၁၀) တန်းအောင်စာရင်းတွေ ကို သြဂုတ်လ( ၉ )ရက်နေ့မနက်( ၀၀: ၃၀ )နာရီခွဲမှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေဆီ ညွှန်ကြားစာ ပေးပို့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် …။ ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဗဟိုကော်မတီရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့မှာ … Read more